वर्णन मिडिया जलजला - वर्णन मिडिया
लकडाउनमा नेपाल दर्शन–४
२३-चैत्र-२०७६ | ०५:३६:१६ pm
रोल्पा–रुकुमलाई माओवादी जनयुद्दको उद्गम थलो मानिन्छ । शसस्त्र युद्द त्यागेर माओवादी शान्तिको बाटोमा हिँडेपछि हिजो माओवादी छापामारहरू हिँडेका गोरेटा, आश्रय लिएका ठाउँ र तालिम गरेका भुगोललाई समेटेर ‘गुरिल्ला पदमार्ग’ बनाइएको छ ।
गुरिल्ला पदमार्गमा माओवादी जनयुद्दका कथाव्यथा मात्र होइन, प्रकृतिका मनोरम छटा र मगर समुदायको सांस्कृतिक सुवास पनि पाइन्छ । त्यही पदमार्गमा पर्ने एउटा सुन्दर भूमि हो–जलजला ।
रोल्पा जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो भूमि जलजला (३,६५० मि.) । प्राकृतिक सम्पदा र धार्मिक आस्थाको केन्द्र जलजला क्षेत्र तीन हजार मिटर उचाइदेखि सुरु हुन्छ । यसको धार्मिक, प्राकृतिक र ऐतिहासिक महत्व छ । यहाँबाट सिस्ने, पुथा, गुर्जा र धौलागिरि हिमाल देखिन्छ । त्यहाँ बीचमा सानो उपत्यका छ । हरिया पाटन छन् । धार्मिक हिसाबले बज्यु बराह, कैलु बराह र सतदेवका मन्दिर छन् ।
बर्खा बेलामा जलजला रङविरङ्गका भुइँफुलले झिलीण्मिली हुन्छ । चैत–वैशाखमा गुराँसको बैंसले रङ्गिन्छ । वर्षमा तीन पटक वैशाख, जेठ र साउने पूर्णिमाका दिन जलजलामा मेला लाग्छ । तीर्थालुहरू भेडा र कुखुराको बलि चढाउँछन् । यसरी पूजासहित बलि चढाएमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने जनविश्वास छ ।
जलजला क्षेत्रमा विशाल भामा गुफा छ । यसको दक्षिणतिर खोला बग्छ । जलजला क्षेत्रमा थरीथरीका गली, जनावर, वनस्पति, फूल, जडीबुटी र चरा पाइन्छन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति कोषले जलजला क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । हिउँदमा जलजला क्षेत्र हिउँले सेताम्मे बन्छ ।
प्रकृतिमा रमाउने, ग्रामीण जीवनशैली अध्ययन गर्ने र माओवादी जनयुद्द अध्ययन गर्नेहरूका लागि जलजला क्षेत्र उपयुक्त भएको गुरिल्ला पदमार्गका अभियन्ता शुरेन्द्र राना बताउँछन् ।
जलजला क्षेत्रमा मगर समुदायको बसोबास छ । जलजला मुन्तिर थवाङ गाउँ र जेलबाङमा होमस्टे तथा होटल सुविधा छ ।
थवाङ र जेलवाङमा सडक, सुरक्षा र सञ्चार सुविधा छ । विद्रोहीहरूको गाउँका रुपमा थवाङले ख्याती कमाएको छ भने जेलवाङ शहिदहरूको गाउँ हो । जनयुद्दमा यहाँका ७३ जना शहिद भएका थिए ।
असोजदेखि माघसम्म जलजला घुम्ने उत्तम समय ।
एउटा सुझाब: जलजलामा एउटा सामुदायिक लज सञ्चालित छ । त्यहाँ बस्न पर्यटकले पहिला नै थवाङमा सम्पर्क गर्नु पर्छ है !
कसरी पुग्ने:काठमाडौं–लिवाङ (४६५ किमि) बसमा १२ घण्टा लाग्छ । अथवा हवाई यात्राबाट काठमाडौं–भैरहवा २५ मिनेटमा पुगिन्छ । भैरहवा–लिवाङको दूरी २३० किमि । लिवाङ–थवाङ ६४ किमि जीपमा ६ घण्टा लाग्छ । थवाङबाट चार घण्टा पदयात्रामा जलजला पुगिन्छ । जेलवाङबाट पनि ६ घण्टा नै लाग्छ ।